Ma Rabtaa In Xaaskaagu Qayliso Oo Macaan Dartiis La Ooyso Xiliga Kulanka Sariirta? Arrimahaan Samee - iftineducation.com
iftineducation.com – War ninyahoow waxaan halkaan kuugu haynaa arrimo dhowr ah oo hadaad samayso galmada ka hor gacalisaaadu ay dareemayso raaxo iyo maacaansi xaad dhaaf ah.
-EEGMADA: Eegmada oo ah tallaabada xigta isdiyaarinta, wuxu ninku xaaskiisa ka toogtaa meel fog, isaga oo jaraya xuduud kasta, kana dhex dusaya qalbigeeda. Eegmada naxariista leh ee ninku eegayo xaaskiisu, waxay toosisaa rabitaankeeda iyada oon is ogeyn.
-HADALKA: Hadalka naxariista leh iyo sheekada macaan ee ninka, waxa lagu tiriyaa inay yihiin sahanka ka horreeya weerar jinsiyeedka. Haweeney kastaa – xitaa kuwa muddada dheer la qabay – kolka ay maqasho hadallada shukaansiga iyo ammaanta isugu jira ee ninkeeda ka soo yeeraya, waa ay jiriricootaa oo godlataa, dabeetana gaartaa heer isdhiibis.
-Shumiska: Dhunkashadu waxa weeye kicin ama baraarujin, iyada oo la isticmaalayo taabasho iyo ur. Kolkay dhunkashadu dhacayso, jirka haweeneydu waxa uu ku lismayaa jirka ninkeeda.
-SALAAXISTA: Dareenka gacantu waxa uu ku badan yahay dhanka gudaha calaacasha (inta cad), waxase usii daran faraha oo dareenku ku sii kordho kolba marka loo sii dhaqaaqo dhinaca fooddooda.